अन्तराष्ट्रिय - Recent Nepal News
A Truth News Portal
चितामा आगो लगाएपछि चल्मलाउन थाले व्यक्ति, डराएर भागे मलामी !
February 19, 2021 adminLeaveaComment on चितामा आगो लगाएपछि चल्मलाउन थाले व्यक्ति, डराएर भागे मलामी !
काठमाडौं – अन्तिम संस्कारका लागि श वलाई चितामा राखिएको थियो । चितामा आ गोसमेत लगाइएको थियो । तर एक्कासी चितामाथि राखिएका ती व्यक्तिले टाउको हल्लाएपछि कोकोहोलो मच्चियो । मृत ठानिएका व्यक्ति चल्मलाउन थालेपछि केही मलामी भागेको भारतीय मिडिया आजतकले बताएको छ । भारतको ओडिशास्थित कपकहाला गाउँका स्थानीय सिमाञ्चल मलिकलाई अन्तिम संस्कार गर्दै गर्दा टाउको हल्लाएको […]
मलेसियामा कामको सिलसिलामा मृ’त्यु भए परिवारलाई आजीवन ९० प्रतिशत तलब !
February 17, 2021 adminLeaveaComment on मलेसियामा कामको सिलसिलामा मृ’त्यु भए परिवारलाई आजीवन ९० प्रतिशत तलब !
काठमाडौं – मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको कामको सिलसिलामा मृ त्यु भएमा मृ तकका आफन्तले आजीवन तलबको ९० प्रतिशत रकम पाउने भएका छन्। वैधानिक रुपमा बसी काम गरिरहेका र मलेसियन सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका नेपाली श्रमिकले उक्त सुविधा पाउने छन्। काम गर्दाको समयमा मृ त्यु भएमा वा घाइते भएमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन समयका लगि […]
म्यान्मारका सडकमा सेनाका बख्तरबन्द गाडी तैनाथ, इन्टरनेट पनि बन्द !
February 15, 2021 adminLeaveaComment on म्यान्मारका सडकमा सेनाका बख्तरबन्द गाडी तैनाथ, इन्टरनेट पनि बन्द !
वर्मा – म्यान्मारका सडकमा सेनाका बख्तरबन्द गाडी तैनाथ गरिएका छन्। स्थानीय समय १ बजे पछि इन्टरनेट पनि बन्द गरिएको छ। सेनाले यही फेब्रुअरी १ देखि गरेको सत्ता कब्जाको विरोधमा भइरहको आन्दोलन अन्त्य गर्न यसो गरेको अनुमान गरिएको छ।
जापानमा शक्तिशाली ७ दशमलव १ स्केलको भू’कम्प !
February 13, 2021 adminLeaveaComment on जापानमा शक्तिशाली ७ दशमलव १ स्केलको भू’कम्प !
जापान – जापानमा शनिबार श’क्तिशाली भू’कम्प गएको छ। स्थानीय समयअनुसार रातिको ११ बजेर १३ मिनेटमा ७ रेक्टर स्केलको भूक’म्प गएको हो। भू’कम्पको केन्द्रविन्दु राजधानी टोकियोबाट टाढा रहेको फुकुसिमा प्रान्तमा रहेको बताइएको छ। जापानमा रहेका नेपालीहरुले टोकियोमा भू’कम्प’को झ’ट्का महशुस भए पनि क्ष ति नभएको बताएका छन्। फुकुसिमामा क्षति भएकोबारे विवरणहरु प्राप्त भइनसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले […]
भारतले सित्तैमा दिन खोज्दा पनि कुनै देशले कोरोना भ्याक्सिन लिन मानेनन् !
February 13, 2021 adminLeaveaComment on भारतले सित्तैमा दिन खोज्दा पनि कुनै देशले कोरोना भ्याक्सिन लिन मानेनन् !
काठमाडौं – भारतले सित्तैमा दिन खोज्दा पनि कुनै पनि देशले कोरोना भ्याक्सिन लिन मानेका छैनन् । भारत–बायोटेकले बनाएको कोभ्याक्सिन अन्य देशले लिन नमानेका हुन् । भारतले ८ देशलाई कोभ्याक्सिनको ८ लाख १० हजार डोज दिन खोजेको थियो । तर, अहिलेसम्म म्यानमारले मात्रै २ लाख डोज लिएको छ । अन्य देशले भ्याक्सिन लिन मानेका छैनन् । भारतले […]
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भूकम्पको शक्तिशाली झड्का !
February 12, 2021 adminLeaveaComment on भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भूकम्पको शक्तिशाली झड्का !
एजेन्सी – भारतीय राजधानी नयाँ दिल्ली लगायत उत्तर भारतमा शुक्रबार राती भूकम्प गएको छ । भूकम्पको झड्का महसुस गरेलगत्तै सर्वसाधारण घरबाहिर निस्किएका छन् । राती १० बजेर ३१ मिनेटमा गएको भूकम्पको झड्का उत्तर भारतका पञ्जाव, जम्बु काश्मिर, हरियाण लगायतका क्षेत्रमा महसुस गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यामहरुले जनाएका छन् । भूकम्प ६.१ रेक्टर स्केलको गएको जनाइएको छ भने […]
चीनको उपग्रह टियानवेन–१ मंगलको कक्षमा प्रवेश गरेपछि…
February 12, 2021 adminLeaveaComment on चीनको उपग्रह टियानवेन–१ मंगलको कक्षमा प्रवेश गरेपछि…
एजेन्सी – चीनको टियानवेन–१ मंगलको कक्षमा प्रवेश गरे लगतै पहिलो तस्वीर पठाएको छ । पहिलो तस्वीर उपग्रहले पठाएको विषयलाई चिनियाँ स्पेस एजेन्सीले जनाएको हो । चीनले आफ्नो उपग्रहको नाम ‘क्वेस्ट अफ हेभेन्ली त्रुथ’ राखेको छ। उपग्रहले मंगलको रोता र सेता तस्वीर पठाएको जनाइएको छ । गत वर्षको जुलाईमा उडेको उपग्रह चीनको पहिलो मंगल मिसन रहेको […]
जापानव्यापी जापानी भाषा वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा नेपाली विद्यार्थी सचिन लामिछाने प्रथम !
February 10, 2021 adminLeaveaComment on जापानव्यापी जापानी भाषा वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा नेपाली विद्यार्थी सचिन लामिछाने प्रथम !
टोकियो – जापानमा आयोजित एक -जापानी भाषा वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा नेपाली युवा सचिन लामिछाने प्रथम भएका छन् । जापानी भाषा अध्यापन गराईरहेका कलेजहरूको राष्ट्रीय संघ (全国専門学校日本語教育協会 – The Association of Colleges for Japanese Language Education) द्वारा आयोजित ३३औँ जापानव्यापी जापानी भाषा वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा योकोहामा डिजाईन कलेजमा अध्ययनरत सचिन लामिछाने प्रथम भएका हुन् । जापानभर रहेका जापानी […]
हरिद्वारमा कुम्भ मेला चलिरहेको बेला माथि हिमनदी फुटेर भीषण बाढी, सयौंको मृत्यु !
February 7, 2021 adminLeaveaComment on हरिद्वारमा कुम्भ मेला चलिरहेको बेला माथि हिमनदी फुटेर भीषण बाढी, सयौंको मृत्यु !
काठमाडौं – भारतको उत्तराखण्डमा हिमताल फुटेर भीषण बाढी आएको छ । आइतबार हिमताल फुटेपछि धौनीनन्दा नदीको जलस्तर अचानक बढेको हो । उत्तराखण्डका मुख्य सचिव ओम प्रकाशले एक भारतीय मिडियालाई बताएअनुसार १ सयदेखि १५० जना मारिएको आशंका गरिएको छ । चमोलीको तपोवन क्षेत्रमा भएको यो घटनामा ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्टलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । यहाँ काम […]
अमेरिकाकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिससँग नेपाली साइनो : लगाउछिन नेपालि पोसाक !
January 26, 2021 adminLeaveaComment on अमेरिकाकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिससँग नेपाली साइनो : लगाउछिन नेपालि पोसाक !
काठमाडौं – शपथग्रहणको भोलिपल्ट प्रार्थना सभामा उपस्थित हुँदा अमेरिकाकी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस रातो ऊनीको पोसाकमा सजिएकी थिइन्। त्यही पोसाकले विश्वकै शक्तिशाली प्रशासन हाँक्न तयार भएकी ह्यारिसलाई नेपालसँग जोडिदिएको छ। जसका कारण हुन्– डिजाइनर प्रबल गुरुङ। ह्यारिसको सो पोसाक गुरुङको न्युयोर्कस्थित डिजाइन वर्कशपमा हातबाटै बनेको थियो। डिजानर गुरुङ र त्यो पोसाकबारे अहिले विश्वभर चर्चा भइरहेको छ। […]
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएनन् भने १३ दिनभित्र हामीले गलहत्याएर निकाल्छौं : पम्फा भुसाल
संसद पुनःस्थापनाको भोलिपल्टै सरकारलाई फेरी अर्को झ’ट्का, सर्वोच्चले दियो फेरी यस्तो आदेश
केपी ओलीको प्रचण्ड-नेपाललाई व्यंग्य : मेरा भाइहरुले लड्डु खाएछन्, के जिते मलाई थाहा छैन
आफ्नी पूर्व प्रेमिकालाई बसभित्र ३० भन्दा बढी पटक च’क्कू घो’ पे, भीड बन्यो रमिते